‘हामी ओली-प्रचण्ड कसैका होइनौं, नेकपाका हौं’
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र अन्तरविरोध चर्किँदै जाँदा पार्टी एकता बचाउन गाह्रो भएको सन्देश नेतृत्वबाटै आउन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा संघीय संसदमा नेकपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले पार्टीलाई विभाजनबाट रोक्न र नेतृत्वलाई सहमतिमा पुग्न दबाब दिन हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका छन्।
अभियानमा ६१ जना सांसदले हस्ताक्षर बुझाएका छन् भने २० जनाले मौखिक समर्थन जनाएका छन्। समूह बनाएर एकअर्काप्रति टीकाटिप्पणीमा उत्रिएका र आवश्यक परेको अवस्थामा एक अर्कालाई बहुमतबाट तह लगाउने रणनीतिमा लागेका नेकपा नेतृत्वलाई यो हस्ताक्षर अभियानले के प्रभाव पार्ला?
दलभित्र हस्ताक्षर अभियानको सन्देश के होला र आन्तरिक द्वन्द्वका कारण प्रधानमन्त्रीले संसदलाई बन्धक बनाउँदा चाहिँ नेकपाका सांसदहरुले संसद खुलाउन हस्ताक्षर अभियान चलाउने आँट चाहिँ किन नगरेका? काठमाडौंप्रेसका लागि शिशिर ढकालले अभियानका अभियन्ता गणेश पहाडीलाई यी लगायतका प्रश्न सोधेका छन्।
-नेकपाभित्रको अन्तरिवरोध चर्किँदै गएको अवस्थामा तपाईंहरुले हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्नुभएको छ। यसको उद्देश्य के हो?
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र जारी अन्तरविरोध अहिलेसम्म समाधान भएको छैन। सचिवालयले विवादको निरुपण गर्न सकेन। स्थायी कमिटी बैठक निष्प्रभावी बनेको अवस्था छ। केन्द्रीय कमिटी बैठकको माग भएपनि बस्ने/नबस्ने टुंगो लागेको छैन। बाहिर पार्टी विभाजनको हल्ला चलिरहेको अवस्था र विवाद समाधान नभएको अवस्थामा नेतृत्वलाई निकासका लागि दबाब दिन तथा नेकपाको एकता अक्षुण राख्नका लागि संघीय संसदका सांसदहरुले हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका हौँ।
-यो अभियानमा कति जनाले समर्थन जनाउनुभएको छ?
राजधानीमा उपस्थित ६१ जना सांसदले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ भने बाहिर जिल्लामा रहेका साथीहरुले पनि मौखिक समर्थन जनाउनुभएको छ। अहिले अभियानका पक्षमा ८१ जनाको समर्थन छ। पार्टीलाई विभाजनबाट जोगाउनुपर्छ भन्ने धेरै साथीहरुको मत रहेकाले यो अभियानमा समर्थन गर्नेको संख्या बढ्दै जानेछ।
-नेकपाभित्र समूह र कित्ताकाट भइरहेको अवस्थामा तपाईंहरुको अभियानले के अर्थ राख्छ?
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मिलेर नयाँ पार्टी गठन भएकाले स्वभाविक रुपमा नेकपाभित्र समूह वा गुट छन्। तर हामीले यो अभियान चलाउँदा स्पष्ट रुपमा आचारसंहिता बनाएका छौँ। हामी कतैतिर पनि ढल्कने छैनौँ। यो अभियानमा सहमत साथीहरु कसैको समर्थन वा विरोधमा हुने मोर्चाबन्दीमा सहभागी हुने छैनौँ।
हामी ओली-प्रचण्ड कसैका होइनौं, नेकपाका हौं भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न यो अभियान सञ्चालन गरेका हौं। विभिन्न गुट वा समूह बनाएर एक-अर्काप्रति गालीगलौजमा उत्रिएको नेतृत्वलाई यो अभियानले सच्याउने छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ। संघीय संसदबाट एकता रक्षाका लागि हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन भएपछि यसले कार्यकर्ता र शुभचिन्तकमाझ पनि सकारात्मक उर्जा पैदा गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।
-संसदीय दलको बैठक राखेर पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई कारबाही गर्ने भन्ने चर्चा पनि छ। त्यतिखेर त तपाईंहरु खुल्नु पर्ला नि?
पार्टीभित्र अन्तरविरोध चर्किँदै जाँदा विभिन्न कोणबाट बहस छलफल हुने गर्छन्। विधि र प्रक्रियाबाट पार्टीलाई नचलाउने हो भने संसदीय दलको बैठक राखेर समेत अध्यक्ष ओलीलाई कारबाही गर्ने भन्ने बहस पनि नेकपामा नभएको होइन। तर, पार्टी एकता बचाउन बहुमत र अल्पमतको खेल खेल्नु हुँदैन सहमतिमै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मत छ। नेतृत्वलाई समेत यो मार्गमै डोर्‍याउनका लागि हामीले अभियान चलाएका हौँ। संसदीय दलको बैठक राखेर बहुमतको आडमा एकले अर्कालाई पेल्ने अवस्था हामी आउन दिदैनौँ।
-आफ्नो आन्तरिक द्वन्द्वका कारण प्रधानमन्त्रीले संसदलाई बन्धक बनाएको अवस्था छ। जनताको आवाज मुखरित गर्ने थलो बन्द गर्नु हुँदैन भनेर अधिवेशन आह्वानका लागि हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्ने हिम्मत चाहिँ तपाईंहरुले किन नगरेको ?
पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण संसदलाई बन्धक बनाउने काम निश्चय पनि दु:खद हो। संसद सञ्चालनका लागि हामीले अनौपचारिक कुरा गर्दा सरकारले विजनेश नभएकाले तत्काल बैठक नराख्ने जवाफ दिएको छ। संघीय संसद अन्तर्गतका समितिहरुले कानून निर्माणको काम गरिरहेकै छन्। पहिलो चरणमा हामीले पार्टी एकताको रक्षाका लागि हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्‍यौँ। आवश्यक पर्‍यो भने संसद बैठक डाक्नका लागि समेत हस्ताक्षर संकलन गर्छौँ।
Published Date: Sunday, 9th August 2020 10:01:44 am